Sideed si wax ku ool ah ugu hagaajin kartaa mareegahaaga Niche yar? | BehMaster
Bogga ugu weyn/Seo/Sideed si wax ku ool ah ugu hagaajin kartaa mareegahaaga Niche yar?
Sideed si wax ku ool ah ugu hagaajin kartaa mareegahaaga Niche yar?
Qoraalka tifaftiraha: "Weydii SEO" waa tiir todobaadle ah oo ay sameeyaan khabiiro SEO ah Shelly Fagin, Ryan Jones, Adam Riemer, iyo Tony Wright. La imow su'aashaada SEO ugu adag oo buuxi foomkayaga. Waxaa laga yaabaa inaad ku aragto jawaabtaada boostada #AskanSEO ee soo socota!
Toddobaadkan loogu talagalay "Weydiiso SEO", waxaan haynaa su'aal ka timid Amy ee Galbeedka Sussex. Waxay waydiisay:
"Sidee si wax ku ool ah ugu hagaajin kartaa degelkaaga meel yar?
Sideed dhulka si wax ku ool ah ugu hagaajin kartaa degelkaaga meel aad u yar oo aan ereyada muhiimka ah la raadinin wax ka badan 100 jeer bishii (sida uu qabo Google Trends/ Keywords planer on Google Ads).
Talo kasta oo loogu talagalay hawl-wadeenka suuq-geynta caymiska xayawaannada qalaad ee keligiis qaata tan waxay noqon doontaa mid faa'iido leh."
Haddii uu jiro nooc ganacsi oo waara oo badeecad ama adeeg ah, waxa jira shabakad ku saabsan badeecadaas ama adeegaas oo lagu horumarin karo makiinadaha raadinta ee waaweyn.
Waxaan horay u qoray in ganacsi kastaa uusan u baahnayn SEO, sidaas darteed waxay u muuqan kartaa in aan iska soo horjeedo in aan sheego in ganacsi kasta oo waara uu si guul leh u horumarin karo matoorada raadinta.
Laakiin xitaa haddii shirkadu aysan ka faa'iidaysan karin mugga weyn ee iibka tooska ah laga bilaabo gujinta ugu dambeysa ee SERP, si wax ku ool ah u beddelka istaraatiijiyadda sare ee maabka iibka waxay ka heli kartaa abaalmarino waaweyn wadada.
Inta badan xogtayadu waa qiyaas
Inta badan qalabka ganacsiga SEO ma aha moodooyinka saxda ah ee saxda ah.
Xataa qalabka si toos ah uga yimaadda makiinadaha raadinta nama siiyaan nambaro dhab ahaan u dhigma xaqiiqada.
Haddii aad u maleyneyso in nambarada Google Keyword Planner ay siinaya tirada saxda ah ee raadinta kelmad kasta oo la bixiyo, waxaa laga yaabaa inuu jiro amiir Nigerian ah oo raba inuu ku siiyo lacag - hubi faylkaaga spam.
Markaad la macaamilayso tiro yar oo baaritaanno ah, xogtu waxay yeelanaysaa shaki badan.
Dhab ahaantii, meelo badan oo yaryar, xogtu si fudud lama heli karo.
Laakiin taasi waa OK - sababtoo ah xitaa marka aan haysano xog, waxaan u baahanahay inaan ku eegno muraayad shaki leh.
Guntii iyo Gebagebadii Waa Xogta Kaliya ee Tirinaysa
Dhamaadka, xogta kaliya ee calaamad u ah barnaamijka SEO ee guuleysta waa xariiqda hoose.
SEO waxay saameyn kartaa xariiqda hoose ee dhowr siyaabood.
SEO ayaa caan ku ah xiritaanka iibka isla markaaba ka dib markii la riixo liiska ka dib su'aal.
Laakiin mararka qaarkood, SEO waxay abuurtaa wacyiga keenaya iibka ka dib isdhexgalka kale ee astaantaada.
Ku maamul niche-gaaga bilaa dhib
Waxaan samaynayey SEO muddo dheer - haa, waan da'ay.
Markii ugu horeysay ee aan bilaabay samaynta SEO, waxaa jiray xog yar oo la heli karo.
Xitaa ma jirin falanqayn sax ah
Haa, aad bay u fududayd in lagu guulaysto matoorada raadinta ee waaweyn ee maalintaas, laakiin guushu wali waxay ku xidhan tahay aqoonta dhagaystayaasha.
Fahamka dhagaystayaashaadu waa furaha lagu maamulayo meel yar oo matoorada raadinta ah.
Haddii ay jiraan dad ku filan oo xiiseynaya alaabtaada ama adeeggaaga si ay u sii wadaan ganacsigaaga, waxaa jira dad raadinaya xalka aad bixiso - xitaa haddii Google Keyword Planner uusan sidaas odhan.
Haddii ay jiraan 10 qof oo keliya bishiiba raadinaya badeecadaada ama adeeggaaga gaarka ah, laakiin dhammaan 10 ka mid ah dadkaas waxay ku dhammaanayaan inay wax ka iibsadaan, waxaad gaadhay guul.
Waxaan ahay taageere weyn oo gelinaya qaddar yar oo lacag ah olole raadinta lacag bixinta ah si aan u fahmo ereyada muhiimka ah ee dhabta ah ee dhagaystayaashu ay raadinayaan.
Halkan waxaa ah maqaal aad u fiican oo leh talooyin ku saabsan isticmaalka PPC si aad u soo ururiso xeeladaha SEO ee waxtarka leh.
Dhisida liisaska ereyada muhiimka ah ee ololaha tijaabada PPC, halkaas oo aad ku socodsiiso ereyada muhiimka ah ee ciyaarta oo aad u fiirsato su'aalaha dhabta ah waxay kaa caawin karaan inaad fahamto mawduucyada iyo ereyada muhiimka ah si aad diirada u saarto dadaalkaaga SEO.
Mowduucyada ka sarreeya ereyada muhiimka ah
Markaad la macaamilayso meel yar, waxaa muhiim ah inaad ka baxdo ereyada muhiimka ah.
Waxaad u baahan tahay inaad maamusho mawduucyada ku xeeran goobtaada.
Summadaada waxay u baahan tahay in lagu xidho qaybaha ballaadhan ee weydiimaha khuseeya alaabtaada ama adeeggaaga.
Google ayaa marar badan noo sheegay in 15% dhammaan weydiimaha aan waligood la arag.
Waxaan ka shakin lahaa in boqolkiiba ay xitaa ka sarreeyaan weydiimaha la xiriira niches yaryar.
Markaad wanaajiso niche yar, waxaa laga yaabaa inaadan awoodin inaad muujiso guusha adigoo u eegaya kelmad gaar ah.
Waxaad u baahan tahay inaad muuqato marka macaamiishu ay weydiinayaan waxyaabaha khuseeya mawduucaaga.
Mawduuc kabaxsan & Mawduuc
Waxaa macquul ah, iskuxirayaashu aad ayey muhiim u yihiin marka la hagaajinayo niche yar.
Niches yaryar, qaybta hoose ee goobaha khuseeya ee ka baxsan ayaa xaddidan.
Google waxay u isticmaashaa "algorithmyada ilmaha" mawduucyo kala duwan, sidaas darteed inkasta oo tirada isku-xirayaashu ay yar yihiin, waxaan ka shakisanahay in Google uu hagaajiyo algorithm-ka si uu u daboolo cabbirka muunadda.
Xasuusnoow sidaan u nidhi waxaad u baahan tahay inaad mawduucyada xukunto?
Hal dariiqo oo taas lagu sameeyo ayaa ah in la yeesho xiriirin iyo sheegid boggaga khuseeya ee darajada u leh mawduuca.
Xidhiidhadaas kaliya maaha inay siiyaan goobtaada awooda matoorada raadinta, laakiin waxay sidoo kale dhigaan astaantaada hore iyo xarunta mawduuca.
Markaad hagaajinayso niche yar, aad bay muhiim u tahay in la abuuro xidhiidho saameeyayaasha meesha bannaan - oo aad ka hesho inay adiga kaa hadlaan, gaar ahaan xidhiidhiye.
Xog la'aanta macnaheedu maaha inaadan tayayn karin matoorada raadinta.
Qaar badan oo naga mid ah waxay noqdeen kuwo aad ugu tiirsan hubkeena agabka ah oo aan iloobin inaadan u baahnayn qalabkaas si aad si guul leh ugu wanaajiso goobtaada makiinadaha raadinta ee waaweyn.
Qalad ha i fahmin – agabku nolosha aad bay u fududeeyaan.
Laakiin waxaa muhiim ah in la xasuusto in inta badan xogta aan hayno ay tahay qiyaas - maaha tiro sax ah.
Oh, iyo haddii aan u wanaajin lahaa shirkad caymis xayawaan ah oo qalaad, waxaan eegi lahaa waxa shirkadaha caymiska xayawaanka waaweyn ay qabanayaan ee shaqeeya oo aan eego haddii ay ka shaqayn karto nicheyga.
Kadib waxaan heli lahaa inta badan mulkiilayaasha xayawaanka qalaad ee leh mareegaha inta aan awoodo oo aan siiyo wax ay ku xidhaan.
Xusuusnow, maaha wax ku saabsan mugga - laakiin waxay ku saabsan tahay xariiqda hoose.
Sida Loola yimaado Walaxda Saxaafadeed u qalanta ee Niches caajiska ah
Sida loo helo Su'aalaha Niche: U wanaaji boggaga Q&A
Sida Loo Abuuro Kacsi, Waxyaabo Xiiso Leh Warshad caajis ah
Waa kuwan wax walba oo aad uga baahan tahay 2020 Tiknoolajiyadaada
3 Qaababka Sawirka Xayeysiisyada Cusub ee Google ayaa caawin kara ganacsatada